Eratosthenes, जीवनी र विज्ञान मा खोज नेटवर्क मौसम विज्ञान
इतिहासभरि त्यहाँ केहि मानिसहरु छन् जसले हाम्रो ग्रहमा धेरै उन्नत ज्ञान राखेका छन्। यी मध्ये एक मानिस थियो Eratosthenes। उहाँ Cirene मा जन्म भएको थियो २ 276 ईसापूर्व। सी। यो पृथ्वीको आकार गणना गर्न सक्षम भइरहेको थियो खगोल विज्ञान मा आफ्नो अध्ययन र आफ्नो महान घटाउन क्षमता को लागी धन्यवाद। त्यस समयको थोरै टेक्नोलोजीको बावजुद एराटोस्थेनेस जस्ता व्यक्तिहरूले हाम्रो ग्रह बुझ्न ठूलो कदम चाले।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई एराटोस्थेनेसको जीवनी र अद्भुत बताउनेछौं।
1 उनका सिद्धान्तहरू
2 अवलोकन अनुसन्धान
3 Eratosthenes बाट दूरी को गणना
4 अन्य योगदानहरू
हामीले यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि यस समयमा त्यहाँ कुनै अवलोकन टेक्नोलोजी मात्र थिएन, तसर्थ खगोल विज्ञान यसको शैशवकालमा शायद नै थियो। त्यसकारण, एराटोस्थेन्नेसको मान्यता धेरै उच्च छ। सुरुमा उनले अलेक्जान्ड्रिया र एथेन्समा अध्ययन गरे। उनी चियोस, अरिस्टनको क्यालिमाकस र साइरेनको लासियानासका अनुयायी बने। ऊ प्रसिद्ध आर्किमिडीजको पनि साथी थियो।
यसलाई बीटा र पेन्टाटलोस को उपनाम दिइयो। यी उपनामहरूको अर्थ एथलीटहरूको प्रकारलाई बुझाउँथ्यो जो धेरै विशेषताहरूको अंश बन्न सक्षम छ र जसको कारणले गर्दा, तिनीहरू मध्ये कुनैमा उत्कृष्ट हुन सक्षम छैन र सधैं दोस्रो हुन्छ। यसले उसको लागि एकदम कठोर उपनाम बनाउँदछ। त्यो उपनामको बाबजुद पनि उनले यसको आधारहरू पछि धेरै रोचक वैज्ञानिक खोजहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्षम भयो।
उनले जीवनभर अलेक्जान्ड्रियाको पुस्तकालयमा काम गरे। केही व्यक्तिहरूका अनुसार उनले sight० बर्षको उमेरमा आफ्नो दृष्टि गुमाए र आफैंलाई भोकभोकै बस्न दिए। उहाँ आर्मिलरी गोलाका सिर्जनाकर्ता हुनुहुन्छ, खगोलविज्ञानको अवलोकनका लागि उपकरण, जुन अझै १ the औं शताब्दीमा प्रयोग भएको थियो। यसले तपाईको जीवनकालमा कत्तिको सक्षम भएको कुरा प्रकट गर्न सक्दछ। यो बाहुली क्षेत्रको लागि धन्यवाद थियो कि उसले ग्रहणको ओलिलोपन जान्न सक्षम भयो।
उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र बीचको अन्तराल हिसाब गर्न सक्षम भयो र यी तथ्यांकहरू पछि टोलेमीले उनका केही अध्ययनहरूमा प्रयोग गरे जस्तै भू-केन्द्रित सिद्धान्त। उनले ग्रहण पनि अवलोकन गर्दै थिए र हिसाब गर्न सक्षम थिए कि पृथ्वीबाट सूर्यको दूरी 804.000.000० 185,००,००० फरलongs्ग थियो। यदि स्टेडियम १ XNUMX XNUMX मिटर मापन गरियो भने, यसले १ 148.752.000२,००० किलोमिटरको दूरी दियो जुन खगोलशास्त्रीय एकाईको एकदम नजीक थियो.
उनको अनुसन्धानको बीचमा, उनले लामो अवलोकनहरू गरे र दूरी गणना प्रदान गरे। उसले प्रदान गर्न सकेको जानकारीको अर्को अंश यो थियो कि पृथ्वीबाट चन्द्रमासम्मको दूरी 780.000,००० स्ट्याडिया थियो। यो हाल झन्डै तीन गुणा बढी मानिन्छ। यद्यपि त्यस समयमा अवस्थित टेक्नोलोजीलाई ध्यानमा राख्दै, यो वैज्ञानिक अग्रिम हो भन्न सकिदैन।
उनले शल्य गोलाका साथ गरेका अवलोकनका लागि धन्यवाद, उनले सूर्यको व्यास गणना गर्न सके। उनले भने कि यो पृथ्वीको २ times पटक हो, जबकि आज यो थाहा छ कि यो १० times गुणा बढी छ।
आफ्नो शिक्षण वर्षको दौडान, उहाँ प्राइम नम्बरहरूको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पृथ्वीको आकार गणना गर्न, उनले त्रिकोणमिती मोडलको आविष्कार गर्नुपर्‍यो जहाँ उनले अक्षांश र देशान्तरको धारणा लागू गरे। यी प्रयोगहरू र हिसाबहरू पहिले प्रयोग भएको थियो, यस्तो घनिष्ठ तरिकामा मात्र होईन।
उनले पुस्तकालयमा काम गरिसकेकाले उनी पपाइरस पढ्न सक्षम भए जुन २१ जून भनेका थिए गर्मी संक्रांति। यसको मतलब, दिउँसोमा सूर्य वर्षको कुनै पनि दिनको तुलनामा जेनिथसँग नजिक हुनेछ। यसलाई सजिलैसँग जमिनमा ठाडो रूपमा ड्राइभ गरेर प्रदर्शन गर्न सकिन्छ र यसले कुनै छाया नदिनुभयो भनेर। हो, यो केवल सीने, इजिप्टमा भएको थियो (जुन जहाँ स्थलीय भूमध्यरेखा अवस्थित छ र जहाँ सूर्यको किरणहरू गर्मी अक्रान्तिको दिनमा पूर्णतया लंबवत आइपुग्छन्)।
यदि यो छाया प्रयोग अलेक्जान्ड्रियामा गरिएको थियो (सिनेनको 800०० किमी उत्तरमा अवस्थित) तपाईं देख्नुहुन्छ कि छडी कसरी एक धेरै छोटो छाया। यसको मतलब त्यो सहरमा दिउँसो सूर्य जेनिथबाट degrees डिग्री दक्षिणमा रहेको थियो।
Eratosthenes बाट दूरी को गणना
ती दुई शहरहरू बीचको दूरीहरू ती शहरहरू बीचको व्यापार भएको कारभानबाट लिन सकिन्थ्यो। यो सम्भव छ कि ऊ यी डेटा अलेक्जान्ड्रियाको पुस्तकालयमा हजारौं पपाइरीहरूको बीचबाट हुन सक्छ। त्यहाँ केही हल्लाहरू छन् कि ती दुबै शहरहरु बीचको कदमहरु गणना गर्न उनले सैनिकहरूको एक रेजिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्‍यो र उनले यसरी दुरीको हिसाब गरे।
यदि हामी हेर्छौं कि एरातोस्थेनेसले इजिप्टियन स्टेडियम प्रयोग गरे, जुन करिब 52,4२..XNUMX सेमी छ, यसले पृथ्वीको व्यास 39.614,4,, .१XNUMX. kilometers किलोमिटर बनाउनेछ। यसले यसलाई १% भन्दा कम त्रुटिको साथ गणना गर्न सम्भव बनाउँदछ। यी तथ्या later्कहरू १ somewhat० वर्ष पछि पोसिडोनिस द्वारा केही हदसम्म परिमार्जन गरिएको थियो। यो संख्या थोरै बाहिर आयो र यो टोलेमीले प्रयोग गरेको एउटा हो र जसमा क्रिस्टोफर कोलम्बसले आफ्नो यात्राको उपयोगिता र सत्यता प्रदर्शन गर्न सक्षम भएको छ।
एरातोस्थेनिसको अन्वेषणको अर्को अर्थ पृथ्वीबाट सूर्य र पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्मको हिसाब थियो। टोलेमी ती हुन् जसले एराटोस्थेनिसले पृथ्वीको अक्षको झुकाव एकदम सटीक रूपमा मापन गर्न सकेका थिए। उसले २º-º१'१ of को पर्याप्त विश्वसनीय र सटीक डाटा स collect्कलन गर्न सक्षम भयो।
उनले आफ्ना अध्ययनहरूमा पत्ता लगाएका सबै नतिजाहरुले उनीहरुलाई "पृथ्वीको मापन" भन्ने पुस्तकमा छोड्दैथिए। वर्तमानमा यो पुस्तक हराएको छ। अन्य लेखकहरू जस्तो क्लेओमेड्स, स्मोर्नाको थियॉन र स्ट्राबोले उनीहरूको कामहरूमा यी गणनाहरूको विवरणहरू प्रतिबिम्बित गरे। यो यी लेखकहरूलाई धन्यबाद हो कि हामी एराटोस्थन्नेस र यसको डाटाको बारेमा आवश्यक जानकारी लिन सक्छौं।
हामीले हेरेका सबैसँग, यो इराटोस्थनेसले विज्ञानलाई गरेको ठूलो योगदानको बारेमा तर्क गर्न सकिदैन। यी बाहेक, उनले अन्य धेरै कार्यहरू पनि गरे जुन मध्ये डिजाईन हो एक लीप क्यालेन्डर र catalog675 तारा र उनीहरूको नामकरणको साथ एक क्याटलग। उनले केही सहायक नदीहरू सहित नीलदेखि खर्तूम सम्मको बाटो पनि तान्न सके। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो बेटा उपनामको लागि योग्य थिएन जुन यससँग थियो र यसको अर्थको लागि कम।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीले तपाईंलाई एराटोस्थनेसको बारेमा बढि जान्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » Eratosthenes
मोन्टेस डे टोलेडो